Betamethasone (ဘီတာမက်သဆုန်း (လိမ်းဆေး)) - Hello Sayarwon
Betamethasone (ဘီတာမက်သဆုန်း (လိမ်းဆေး))
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Betamethasone (ဘီတာမက်သဆုန်း (လိမ်းဆေး))
Betamethasone (ဘီတာမက်သဆုန်း (လိမ်းဆေး)) ကဘာလဲ။
Generic Name: Betamethasone (ဘီတာမက်သဆုန်း (လိမ်းဆေး)) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Betamethasone (ဘီတာမက်သဆုန်း (လိမ်းဆေး)) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Betamethasone (လိမ်းဆေး)ကို နှင်းခူ၊ psoriasis၊ ဓါတ်မတည့်ခြင်း စတဲ့ အရေပြားရောဂါတွေကို ကုသဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။ Betamethasone က ယင်းအခြေအနေတွေမှာ တွေ့ရတဲ့ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ယားယံခြင်းနှင့် နီရဲနေခြင်းတို့ကို သက်သာစေပါတယ်။
Betamethasone (ဘီတာမက်သဆုန်း (လိမ်းဆေး)) ဘယ်လိုသုံးသင့်သလဲ
Betamethasone (လိမ်းဆေး) ကို ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် စာရွက်မှာပါတဲ့ ညွန်ကြားချက်အတိုင်း သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ ညွန်ကြားချက်တွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Betamethasone ကို အရေပြားပေါ်တွင် လိမ်းပေးပါ။
မျက်နှာ၊ ပေါင်ခြံ၊ ချိုင်းကြားနှင့် အတွင်းခံဝတ်ဆင်ရာနေရာ စတဲ့ အထိအခိုက်လွယ်သော နေရာတွေကို လိမ်းမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းသင့်ပါတယ်။
ညွှန်ကြားထားတဲ့ အခြေအနေတွေမှသာလျှင် အသုံးပြုပေးပါ။
ညွန်ကြားသော ကြာချိန်ထက် ပိုမသုံးပါနှင့်။
အခြေအနေက ၂ပတ်အတွင်းမှာ နဂိုအတိုင်းပဲဖြစ်မယ်၊ ပိုဆိုးလာမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
ဆေးမလိမ်းခင်မှာ လိမ်းမယ့်နေရ ာကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ခြောက်ခြောက်သွေ့သွေ့ ထားရပါမယ်။
လက်ဆေးပြီး ဆေးအနည်ငယ်လိမ်းမယ့် နေရာသို့ တင်ပြီး ညင်သာစွာ ပွတ်လိမ်းပေးပါ။
ရောဂါဖြစ်နေသည့်နေရာကို အမြဲတစေ သန့်ရှင်းနေပါစေ။
ဆရာဝန်မညွန်ကြားပဲနဲ့ ဒဏ်ရာကို မဖုံးပါနှင့်၊ ပတ်တီးမစီးပါနှင့်။
ယင်းဆေးကို လိုးရှင်းအနေဖြင့် လိမ်းမယ်ဆိုရင် အသုံးမပြုခင် ဆေးဘူးကို သေချာ လှုပ်ခါပေးပါ။
ရေတိမ်ဖြစ်စေနိုင်သလို၊ ပိုဆိုးစေနိုင်သောကြောင့် မျက်လုံးထဲ အဝင်မခံပါနှင့်။ ဆေးတွေလိမ်းထားမယ်ဆိုရင် ရေဖြင့် ပြောင်အောင်ဆေးပေးပါ။
မျက်လုံး၊နှာခေါင်းအတွင်း မဝင်အောင်လည်း သတိထားပေးပါ။ ဝင်သွားမယ်ဆိုရင်လည်း ရေဖြင့် ပြောင်အောင်ဆေးပေးပါ။
Betamethasone (ဘီတာမက်သဆုန်း (လိမ်းဆေး)) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
နေရောင် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းနှင့် အစိုဓါတ်တို့ဖြင့် ထိတွေ့ခြင်းမှ ရှောင်ကျဉ်ကာ အခန်းအပူချိန်မှာ ထိန်းသိမ်းတာ အကောင်းဆုံးပါ။ Betamethasone (လိမ်းဆေး) ကို ရေချိုးခန်းနဲ့ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ သိမ်းမယ်ဆိုရင် ဆေးပျက်စီးဆုံးရှုံးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Betamethasone (လိမ်းဆေး) တံဆိပ် အမျိုးမျိုး ရှိသလို ထိန်းသိမ်းပုံလည်း အမျိုးမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဆေးဘူးပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ ထိန်းသိမ်းနည်းကို ဂရုတစိုက် ဖတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သို့မဟုတ်က ကျွမ်းကျင်သူတို့ကို မေးမြန်းပေးပါ။ ဘေးဥပါဒ် မဖြစ်စေရန်အတွက် ကလေးနဲ့ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တို့ရဲ့ အဝေးတွင် ထားရှိပေးပါ။
Betamethasone (လိမ်းဆေး) ကို မညွန်းထားပဲနဲ့ အိမ်သာထဲသို့ ရေမြောင်းအတွင်းသို့ မစွန့်ပြစ်သင့်ပါ။ သက်တမ်းကျော်သွားမယ် ဆိုရင်၊ မလိုတော့ဘူးဆိုရင် သေချာစွန့်ပြစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဘယ်လိုစွန့်ပြစ်ရမလဲဆိုတာ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျွမ်းကျင်သူတို့ကို မေးမြန်းပေးပါ။
Betamethasone (ဘီတာမက်သဆုန်း (လိမ်းဆေး)) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Betamethasone ကို အသုံးမပြုခင်မှာ အောက်ပါတို့ ဖြစ်နေပါက ဆရာဝန်အား အသိပေးပါ။
Betamethasone ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း။ လမ်းညွှန်စာရွက်ထဲတွင် အသေးစိတ်ပါ ပါတယ်။
အခြားဆေးဝါး၊ အစားအစာ၊ ဆိုးဆေး၊ ကြာရှည်ခံဆေးဝါးနှင့် တိရိစ္ဆာန်တို့ဖြင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း။
ကလေးများ။ Betamethasone ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါပဲ ၆နှစ်အောက် ကလေးများတွင် အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
အခြား ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ ရှိနေခြင်း။
ကင်ဆာ ဓါတ်ကင်ခြင်း၊ အခြားလိမ်းဆေးများ၊ သက်စောင့်ဓါတ်များ အသုံးပြုနေခြင်း။ အရေပြားရောဂါများ၊ ဆီးချိုသွေးချို၊ ရေတိမ်၊ အတွင်းတိမ်၊ သွေးလည်ပတ်မှုမကောင်းခြင်း၊ ကိုယ်ခံအားမူမမှန်ခြင်း တို့ရှိနေခြင်း။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေခြင်နှင့် နို့တိုက်မိခင် ဖြစ်နေခြင်း။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Betamethasone (ဘီတာမက်သဆုန်း (လိမ်းဆေး)) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်နဲ့ နို့တိုက်နေစဉ်အတွင်းမှာ သောက်သုံးမယ်ဆိုရင် စိတ်ချရလားမချရဘူးလား ဆိုတာတော့ လုံလောက်တဲ့ လေ့လာမှုတွေ မပြုလုပ်ရသေးပါဘူး။ ဆိုးကျိုးတွေနည်းစေပြီး ဆေးရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိစေဖို့အတွက် မသောက်သုံးခင်မှာ ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
Betamethasone (ဘီတာမက်သဆုန်း (လိမ်းဆေး)) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Betamethasone အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းမှာ ပူလောင်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ စူးနေခြင်း စသော ဆိုးကျိုးများကို ဆေးလိမ်းထားသော နေရာတွင် ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အမွှေးကျွတ်ခြင်းနှင့် ဆံပင်ပါးသွားတာတွေကတော့ မပြင်းထန်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေပါ။
အောက်ပါကဲ့သို့ ဘာမှ ရေရေရာရာ မသိရသော ဆိုးကျိုးများလည်း ခံစားရနိုင်ပါသေးတယ်။
အနာဖြစ်ခြင်း၊ ပူလောင်ခြင်း၊ အသားမာတက်ခြင်း၊ ခြောက်သွေ့လာခြင်း၊ အလွှားလိုက် ကွာကျခြင်း။
ယားယံခြင်း၊ အကြေးခွံများ ဖြစ်လာခြင်း၊ အလွန်အကျွန် နီမြန်းလာခြင်း၊ အနာများဖြစ်လာခြင်း၊ ရောင်ရမ်းလာခြင်း။
ပါးစပ်တစ်ဝိုက်တွင် နီမြန်နေခြင်း၊ အကြေးခွံများ ဖြစ်နေခြင်း။
အထူးသဖြင့် အရေပြားခေါက်နှစ်ခုကြား (ဥပမာ လက်ချောင်း၂ချောင်းကြား)တွင် အရေပြားပါးလာပြီး အလွယ်တကူ အညိုအမဲစွဲလာခြင်း။
ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တာတော့ ရှားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အောက်ပါ ဓါတ်မတည့်ခြင်း လက္ခဏာတွေ ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ ဆေးပညာအကူအညီရယူဖို့ လိုအပ်ပါပြီ။
ပူလောင်ခြင်း၊ ပိုးကောင်များ သွားနေသလိုဖြစ်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ ထုံကျင်ခြင်း၊ ရွစိစိဖြစ်နေခြင်း။
ပူလောင်သော၊ ယားယံသော၊ ပင်အပ်ခေါင်းအရွယ်အစားရှိသော အနီရောင် အနာများ ပေါက်နေခြင်း။
အမွှေးပေါက်သောနေရာများတွင် နာကျင်ခြင်း၊ ပူလောင်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း ဒါမှမဟုတ် အမွှေးအောက်ခြေတွင် ပြည်များတွေ့ရခြင်း။
နဖူး၊ နောက်ကျော၊ လက်မောင်း၊ ခြေထောက်တို့တွင် အမွှေးများ ပိုမိုပေါက်လာခြင်း
အသားအရေ ပိုမို တောက်ပလာခြင်း
ဆေးလိမ်းထားသော မည်းနေသည့် နေရာတွင် အသားအရေပိုမို တောက်ပလာခြင်း
လက်၊ မျက်နှာ၊ ခြေထောက်၊ ကိုယ်လုံးနှင့် ပေါင်ခြံတို့တွင် နီခရမ်းရောင် အကြောင်းများ ပေါ်လာခြင်း
လူတိုင်းတော့ ယင်းဆိုးကျိုးတွေကို မခံစားရနိုင်ပါဘူး။ အထက်တွင် မဖော်ပြထားသော ဆိုးကျိုးများလည်း ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ ဆိုးကျိုးများ ခံစားနေရပြီဆိုပါက ဆရာဝန်၊ ကျွမ်းကျင်သူတို့ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Betamethasone (ဘီတာမက်သဆုန်း (လိမ်းဆေး)) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Betamethasone (လိမ်းဆေး) ကို အခြားဆေးဝါးတွေက ဆေးရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲပေးခြင်းအားဖြင့် သိုမဟုတ် ဆိုးကျိုးတွေကို ပိုမို ပြင်းထန်လာစေခြင်းအားဖြင့် သက်ရောက်ပါတယ်။ ပြင်းထန်းတဲ့ ဆေးအချင်းချင်း ဓါတ်ပြုခြင်းတွေကို ရှောင်ကျဉ်ဖို့ သောက်သုံးလျှက်ရှိသော ဆေးဝါးတွေ( ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသောဆေးများ၊ မညွှန်ကြားထားသော ဆေးများ၊ ဘယဆေးဝါးများ) ကို ချရေးပြီး သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတို့ကို ပေးထားပါ။ ဘေးကင်းစေရန်အတွက် ဆေးသောက်တာကို ရပ်တန့်ခြင်း၊ သောက်သုံးလျှက်ရှိသော ပမာဏ ပြောင်းလဲခြင်းတို့အား ဆရာဝန် မညွှန်ကြားဘဲနဲ့ မိမိသဘောအတိုင်း မပြုလုပ်နှင့်။
Betamethasone နဲ့ ဓါတ်ပြုနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
acarbose; acetohexamide; ActoPlus Met (metformin / pioglitazone); ActoPlus Met XR (metformin / pioglitazone); Actos (pioglitazone); Afrezza (insulin inhalation, rapid acting); albiglutide; alogliptin; alogliptin / metformin; alogliptin / pioglitazone; Amaryl (glimepiride); Apidra (insulin glulisine); Apidra Solostar (insulin glulisine); Avandamet (metformin / rosiglitazone); Avandaryl (glimepiride / rosiglitazone); Avandia (rosiglitazone); Basaglar (insulin glargine); Bydureon (exenatide); Byetta (exenatide); canagliflozin; canagliflozin / metformin; chlorpropamide; dapagliflozin; dapagliflozin / metformin; DiaBeta (glyburide); Diabinese (chlorpropamide); Duetact (glimepiride / pioglitazone); dulaglutide; Dymelor (acetohexamide); empagliflozin; empagliflozin / linagliptin; empagliflozin / metformin; exenatide; Exubera (insulin inhalation, rapid acting); Farxiga (dapagliflozin); Fortamet (metformin); glimepiride; glimepiride / pioglitazone; glimepiride / rosiglitazone; glipizide; GlipiZIDE XL (glipizide); glipizide / metformin; Glucophage (metformin); Glucophage XR (metformin); Glucotrol (glipizide); Glucotrol XL (glipizide); Glucovance (glyburide / metformin); Glumetza (metformin); glyburide; glyburide / metformin; Glycron (glyburide); Glynase (glyburide); Glynase PresTab (glyburide); Glyset (miglitol); Glyxambi (empagliflozin / linagliptin); Humalog (insulin lispro); Humalog KwikPen (insulin lispro); Humalog Mix 50 / 50 (insulin lispro / insulin lispro protamine); Humalog Mix 50 / 50 KwikPen (insulin lispro / insulin lispro protamine); Humalog Mix 50 / 50 Pen (insulin lispro / insulin lispro protamine); Humalog Mix 75 / 25 (insulin lispro / insulin lispro protamine); Humalog Mix 75 / 25 KwikPen (insulin lispro / insulin lispro protamine); Humalog Mix 75 / 25 Pen (insulin lispro / insulin lispro protamine); Humalog Pen (insulin lispro); Humulin 50 / 50 (insulin isophane / insulin regular); Humulin 70 / 30 (insulin isophane / insulin regular); Humulin 70 / 30 Pen (insulin isophane / insulin regular); Humulin L (insulin zinc); Humulin N (insulin isophane); Humulin N Pen (insulin isophane); Humulin R (insulin regular); Humulin R U-500 (Concentrated) (insulin regular); Humulin R U-500 KwikPen (insulin regular); Humulin U (insulin zinc extended); Iletin II Lente Pork (insulin zinc); Iletin II NPH Pork (insulin isophane); Iletin II Regular Pork (insulin regular); Iletin Lente (insulin zinc); Iletin NPH (insulin isophane); Iletin Regular (insulin regular); insulin; insulin aspart; insulin aspart protamine; insulin aspart / insulin aspart protamine; insulin aspart / insulin degludec; insulin degludec; insulin detemir; insulin glargine; insulin glulisine; insulin inhalation, rapid acting; insulin isophane; insulin isophane / insulin regular; Insulin Lente Pork (insulin zinc); insulin lispro; insulin lispro protamine; insulin lispro / insulin lispro protamine; Insulin Pork Mix (insulin isophane / insulin regular); Insulin Purified NPH Pork (insulin isophane); Insulin Purified Regular Pork (insulin regular); insulin regular; insulin zinc; insulin zinc extended; Invokamet (canagliflozin / metformin); Invokana (canagliflozin); Janumet (metformin / sitagliptin); Janumet XR (metformin / sitagliptin); Januvia (sitagliptin); Jardiance (empagliflozin); Jentadueto (linagliptin / metformin); Jentadueto XR (linagliptin / metformin); Juvisync (simvastatin / sitagliptin); Kazano (alogliptin / metformin); Kombiglyze XR (metformin / saxagliptin); Lantus (insulin glargine); Lantus OptiClik Cartridge (insulin glargine); Lantus Solostar (insulin glargine); Lente Iletin II (insulin zinc); Levemir (insulin detemir); linagliptin; linagliptin / metformin; liraglutide; Metaglip (glipizide / metformin); metformin; metformin / pioglitazone; metformin / repaglinide; metformin / rosiglitazone; metformin / saxagliptin; metformin / sitagliptin; Micronase (glyburide); miglitol; nateglinide; Nesina (alogliptin); Novolin 70 / 30 (insulin isophane / insulin regular); Novolin 70 / 30 Innolet (insulin isophane / insulin regular); Novolin 70 / 30 PenFill (insulin isophane / insulin regular); Novolin L (insulin zinc); Novolin N (insulin isophane); Novolin N Innolet (insulin isophane); Novolin N PenFill (insulin isophane); Novolin R (insulin regular); Novolin R Innolet (insulin regular); Novolin R PenFill (insulin regular); Novolog (insulin aspart); NovoLog FlexPen (insulin aspart); NovoLog Mix 50 / 50 (insulin aspart / insulin aspart protamine); NovoLog Mix 70 / 30 (insulin aspart / insulin aspart protamine); NovoLog Mix 70 / 30 FlexPen (insulin aspart / insulin aspart protamine); Novolog Mix 70 / 30 PenFill (insulin aspart / insulin aspart protamine); NovoLog PenFill (insulin aspart); NPH Insulin (insulin isophane); Onglyza (saxagliptin); Orinase (tolbutamide); Oseni (alogliptin / pioglitazone); pioglitazone; pramlintide; PrandiMet (metformin / repaglinide); Prandin (repaglinide); Precose (acarbose); Relion Novolin 70 / 30 Innolet (insulin isophane / insulin regular); Relion Novolin N (insulin isophane); ReliOn / Humulin R (insulin regular); ReliOn / Novolin 70 / 30 (insulin isophane / insulin regular); ReliOn / Novolin R (insulin regular); repaglinide; Rezulin (troglitazone); Riomet (metformin); rosiglitazone; Ryzodeg 70 / 30 (insulin aspart / insulin degludec); saxagliptin; Saxenda (liraglutide); simvastatin / sitagliptin; sitagliptin; Starlix (nateglinide); Symlin (pramlintide); Symlin Pen (pramlintide); SymlinPen 120 (pramlintide); SymlinPen 60 (pramlintide); Synjardy (empagliflozin / metformin); Tanzeum (albiglutide); Tol-Tab (tolbutamide); tolazamide; tolbutamide; Tolinase (tolazamide); Toujeo (insulin glargine); Toujeo Solostar (insulin glargine); Tradjenta (linagliptin); Tresiba (insulin degludec); troglitazone; Trulicity (dulaglutide); Velosulin BR (insulin regular); Victoza (liraglutide); Xigduo XR (dapagliflozin / metformin).
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Betamethasone (ဘီတာမက်သဆုန်း (လိမ်းဆေး)) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
အရက်နဲ့ အစားအစာတွေက Betamethasone (လိမ်းဆေး) အပေါ်မှာ ဆေးရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ ပြောင်းလဲပေးစေခြင်းဖြင့် ဒါမှမဟုတ် ဆိုးကျိုးတွေကို ပိုမို ပြင်းထန်စေခြင်းအားဖြင့် သက်ရောက်ပါတယ်။ ယင်းဆေးကို အသုံးမပြုခင်မှာ အရက်နှင့် အစားအစာတို့ဖြင့် ဓါတ်ပြုမှုရှိလား မရှိဘူးလားဆိုတာကို ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ကျွမ်းကျင်သူတို့နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Betamethasone (ဘီတာမက်သဆုန်း (လိမ်းဆေး)) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Betamethasone (လိမ်းဆေး)က ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေနဲ့ သက်ရောက်မှုတွေ ရှိပါတယ်။ ယင်းသက်ရောက်မှုတွေက ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကို ပိုဆိုးသွားစေနိုင်သလို ဆေးရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကိုလည်း ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ဆရာဝန် နဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတွေကို အမြဲတမ်းအသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ Betamthasone အသုံးမပြုခင်မှာ အောက်ပါတို့ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်ကို အသိပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အတွင်းခံဝတ်သောနေရာတွင် အဖုအပိမ့်များ ပေါက်နေခြင်း
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Betamethasone (ဘီတာမက်သဆုန်း (လိမ်းဆေး)) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကရင်၊ ဂျယ်၊ အဆီ။ တစ်နေ့တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် နှစ်ကြိမ် ဒဏ်ရာနေရာသို့ ပါးပါးလေးလိမ်ပေးပါ။ ရေမြှုပ်၊ လိုးရှင်း။ တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်( မနက်တစ်ကြိမ်၊ ညတစ်ကြိမ်) လိမ်းပေးပါ။
တစ်ပတ်ကို 45g ထက် မပိုရပါ။
၂ပတ်ကြာပြီးနောက် မတိုးတက်လာဘူးဆိုရင်တော့ ဆေးပညာအကြံဉာဏ်များ တောင်းခံပါ။
ကလေးတွေအတွက် Betamethasone (ဘီတာမက်သဆုန်း (လိမ်းဆေး)) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အရေပြားရောဂါအတွက်။ ၁၂နှစ်မှစသော ကလေးငယ်များအတွက်။
ကရင်၊ ဂျယ်၊ အဆီ။ တစ်နေ့တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် နှစ်ကြိမ် ဒဏ်ရာသို့ ပါးပါးလေးလိမ်းပေးပါ။
ရေမြှုပ်၊ လိုးရှင်း။ တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်( မနက်တစ်ကြိမ်၊ ညနေတစ်ကြိမ်) လိမ်းပေးပါ။
တစ်ပတ်ကို 45g ထက်မပိုရပါ။
၂ပတ်အကြာမှာ တိုးတက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ ဆေးပညာအကြံဉာဏ်များ တောင်းခံပေးပါ။
ကလေးများအတွက် အသုံးပြုနိုင်တယ့် ပမာဏကို မထုတ်ပြန်ရသေးပါဘူး။ ကလေးများအတွက် ဘေးမကင်းနိုင်ပါဘူး။ အသုံးမပြုခင်မှာ ဆေး၏ဘေးကင်းမှုကို နားလည်ထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ နောက်ထပ်သိရှိလိုသည်များအတွက် ဆရာဝန်၊ကျွမ်းကျင်သူတို့ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
Betamethasone (ဘီတာမက်သဆုန်း (လိမ်းဆေး)) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Betamethasone (လိမ်းဆေး) ကို အောက်ပါ ပုံစံမျိုး၊ ပြင်းအားမျိုးတို့ဖြင့် ဝယ်ယူရရှနိုင်ပါတယ်။
Betamethasone Dipropionate လိုးရှင်း USP (အားဖြည့်), 0.05%
Betamethasone Dipropionate ကရင်(အားဖြည့်), 0.05%
ယင်းဆေးဝါးသည် မျိုချမိပါက အန္တရယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဆေးလွန်သွားတယ်၊ မျိုချမိသွားတယ်လို့ သံသယရှိမယ်ဆိုရင် အဆိပ်ဖြေဆေးဌာနများနှင့် အရေးပေါ်ဌာနများသို့ ဆက်သွယ်ပေးပါ။ ဆေးလွန်သွားတဲ့ အခါမှာ ဆေးရုံကားခေါ်ပါ ဒါမှမဟုတ် နီးစပ်ရာဆေးရုံသို့သွားပါ။
Betamethasone (လိမ်းဆေး) အသုံးပြုဖို့ လွတ်သွားမယ်ဆိုရင် တတ်နိုင်သမျှ မြန်မြန် ပြန်အသုံးပြုပေးပါ။ နောက်ထပ်ဆေးလိမ်းဖို့အချိန်နဲ့ နီးနေမယ်ဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့ ဆေးကို လွှတ်လိုက်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လိမ်းသွားပါ။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ စက်တင်ဘာ 12, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း အောက်တိုဘာ 20, 2017
Betamethasone Cream. https://www.drugs.com/pro/betamethasone-cream.html. Accessed July 28, 2016.
Betamethasone for severe inflammatory skin conditions. http://patient.info/medicine/betamethasone-for-severe-inflammatory-skin-conditions. Accessed July 28, 2016.
betamethasone topical. https://www.drugs.com/mtm/betamethasone-topical.html. Accessed July 28, 2016.
Betamethasone. https://www.drugs.com/pro/betamethasone.html. Accessed July 28, 2016.
Betamethasone Topical. https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682799.html. Accessed July 28, 2016.
Betamethasone Dipropionate Topical. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-978-1755/betamethasone-dipropionate-topical/betamethasone-dipropionate-spray---topical/details#overdose. Accessed July 28, 2016.